Faysal Cali Waraabe Oo Taageereyaashiisa u soo jeediyay inay joojiyaan rabashadaha | Somaliland.Org
July 30, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)-Guddoomiyaha Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa ugu baaqay taageereyaashiisa inay joojiyaan mudaharaad rabshado watay oo ay maanta ka dhigeen degmada Maxamuud Haybe iyo meelo ka mid ah shaaricyada magaalada Hargeysa gaar ahaan xaruntii dhexe ee xisbigaasi oo haatan ciidanka Boolisku gacanta ku hayo markii labada garab ku hirdameen gacan ku haynteeda.
“Waxaynu nahayd dal dawlad iyo sharci leh, waxaan tabashadeena ku dhamaysanaynaa
Wanaag, , xisbi ahaan waxaynu ku caan baxnay badbaadada Somaliland ee waxaan taageereyaasha UCID u soo jeedinayaa inaanay samayn wax dhibaato ah oo dalkeena waxyeelaya oo inaga la inoo aaneeyo,”ayuu yidhi Eng. Faysal Cali Waraabe, oo maanta Saxaafada u waramayay rabshadihii ay sameeyeen taageereyaashiisu ka dib.
Guddoomiyuhu waxa uu sheegay inay arrinta khilaafka xisbiga UCID dhexdiisa ka aloosan uu gacanta ku hayo Wasiirka Daakhiliga Somaliland, waxaanu dawlada u soo jeediyay inay arrintaasi sidii loo dhamayn lahaa iska xil saaraan.
“Waxa arrintii gacanta ku haya Wasiirka Arrimaha Gudaha, waxaan u soo jeedinayaa inay dawladdu arrintaasi soo afjarto. Taageereyaashana waxaan leeyahay yaanay dhicin wax dalka waxyeelayna oo inaga la inoo aaneynayo,”ayuu yidhi Guddoomiyuhu.
Guddoomiyaha UCID waxa uu ka hadlay arrinta xudunta u ahayd khilaafka labada garab u kala jabiyay xisbigiisii waxaanu yidhi “Sidaad ogtihiinba 24-kii bishan July koox ka kooban illaa 7 xubnood oo ay ku jiraan Guddoomiyaha Baaralaamka iyo Maayar Ku xigeenka caasimada oo labadaba aad ogtihiin gacanta aan ku lahaa ayaa soo saaray baaq ay ku leeyihiin waanu ku ridnay oo waxaanu ridnay Guddoomiyihii UCID oo ninka la yidhaahdo Aadan Waqaf ayaanu ka dhignay Guddoomiyaha ku meel gaadhka ah ee xisbiga.”
Faysal oo hadalkiisa sii watay waxa uu yidhi “27-kii bishan ayaa xafiiskaygii inta 20 askari la soo siiyay Waqaf iyo kooxdaasi uu watay ayaa la geliyay markii aan ugu tagay ee aan ku idhi maxaa dhacay? Waxay igu yidhaahdeen waanu ku ridnay waxaanan ku idhi xeerka aad igu tideen intaad maxkamada la tagtaan ha yidhaahdaan waa sharci anigaa markaa anigaa markaa idiinka baxaya xafiiska. Askartii waxay yidhaadeen waa runtiisa ee sharci ayuu kaga bixi karaa waa la iga saaray ka dibna waxay soo kaxayteen Xeer Ilaaliyaha Guud wuxuu yidhi waxa la yidhaahdaa Xasan waxaan ku idhi waa kan xeerkaygii ee wixii sharciya ka soo saar wuu eegay ka dibna iyagii ayuu ku yidhi ina keena ka dibna qol ayuu la galay dibna iigumuu soo noqon.”
Previous PostHoggaan cusub oo lagu doortay Shirweynihii Afraad ee SOLJA oo la soo xidhayNext PostIsuduwaha Caafimaadka Togdheer oo si kulul uga hadlay hadalo ka soo yeedhay Masuuliyiin	Blog